Translations < Burmese < Stay < GlotPress Page2– Translate WordPress.com
Translation of Stay: Burmese	Glossary
54 / 147 Strings (36 %)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (147) • Untranslated (91) • Waiting (0) • Fuzzy (2) • Warnings (0) • Current Filter (56)
Newer posts <span class="meta-nav">&rarr;</span>	 စာမူ အသစ်များ <span class="meta-nav">&rarr;</span>	 Details
စာမူ အသစ်များ <span class="meta-nav">&rarr;</span>
2014-06-02 04:23:59 GMT
<span class="meta-nav">&larr;</span> Older posts	 <span class="meta-nav">&larr;</span> စာမူ အေဟာင်းများ	 Details
<span class="meta-nav">&larr;</span> စာမူ အေဟာင်းများ
2014-06-02 04:23:53 GMT
&rarr;	Next post link &rarr;	 Details
2014-06-02 04:23:48 GMT
2014-06-02 04:23:44 GMT
Post navigation	 စာမူ လမ်းေြကာင်းြပ	 Details
2014-06-02 04:23:37 GMT
Page %s	 စာမျက်နှာ %s	 Details
2014-06-02 04:23:25 GMT
Email Address	 အီး​မေးလ် လိပ်စာ	 Details
2017-11-14 08:39:00 GMT
Citation	 ကိုးကားချက်	 Details
2014-06-02 04:23:17 GMT
Both comments and trackbacks are currently closed.	 မှတ်ချက်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ြပန်လည် သတင်းပို့ချက်များကို ေလာေလာဆယ် ပိတ်ထားပါသည်။	 Details
မှတ်ချက်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ြပန်လည် သတင်းပို့ချက်များကို ေလာေလာဆယ် ပိတ်ထားပါသည်။
2014-06-02 04:23:05 GMT
Trackbacks are closed, but you can <a class="comment-link" href="#respond" title="Postacomment">postacomment</a>.	 ချိတ်ဆက်မှု အသိေပးြခင်းအား ပိတ်ထားသည်။ သို့ေသာ် <a class="comment-link" href="#respond" title="မှတ်ချက်တစ်ခု ေရးပါ">မှတ်ချက်တစ်ခု </a>ေပးနိုင်သည်။	 Details
ချိတ်ဆက်မှု အသိေပးြခင်းအား ပိတ်ထားသည်။ သို့ေသာ် <a class="comment-link" href="#respond" title="မှတ်ချက်တစ်ခု ေရးပါ">မှတ်ချက်တစ်ခု </a>ေပးနိုင်သည်။
2014-06-02 04:23:02 GMT
Comments are closed, but you can leaveatrackback: <a class="trackback-link" href="%s" title="Trackback URL for your post" rel="trackback">Trackback URL</a>.	 မှတ်ချက်ေပးြခင်းကို ပိတ်ထားသည် သို့ေသာ် ချိတ်ဆက်မှု အသိေပးချက်ထားခဲ့နိုင်သည်။ : <a class="trackback-link" href="%s" title="သင့်စာမူနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အသိေပး URL" rel="trackback">ချိတ်ဆက်မှု အသိေပး URL</a>.	 Details
2014-06-02 04:22:58 GMT
<a class="comment-link" href="#respond" title="Postacomment">Postacomment</a> or leaveatrackback: <a class="trackback-link" href="%s" title="Trackback URL for your post" rel="trackback">Trackback URL</a>.	 <a class="comment-link" href="#respond" title="မှတ်ချက်တစ်ခုေပးပါ">မှတ်ချက်တစ်ခု ေပးပါ</a> သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှု အသိေပးချက်ကို ထားခဲ့ပါ : <a class="trackback-link" href="%s" title="သင့်စာမူအတွက် ချိတ်ဆက်မှု အသိေပးချက် URL " rel="trackback">ချိတ်ဆက်မှု အသိေပးချက် URL</a>.	 Details
2014-06-01 20:44:21 GMT
Next &rarr;	 ေရှ့ဆက်သွား &rarr;	 Details
2014-06-01 20:44:14 GMT
&larr; Previous	 &larr; ေနာက်ြပန်သွား	 Details
2014-06-01 20:44:10 GMT
Skip to content	 စာကိုယ်ပိုင်းသို့ သွားရန်	 Details
2014-06-01 20:44:02 GMT